Senate-ka Mareykanka Oo Meel Mariyay Sharci Horay Trump U diiday – Goobjoog News
Koonfur Galbeed : Doorashada Aqalka Sare oo Ka Bilaabatay Baydhabo
Golaha Senate-ka ayaa ansixiyay $ 1.9 tiriliyan oo doolar oo ah qorshaha gargaarka coronavirus Sabtidii, taas oo ka dhigaysa Congress-ka hal talaabo oo u dhow fulinta ballanqaadkii doorashada ee Madaxweyne Biden iyo xulafadiisa Dimuqraadiyiinta, kadib dhaqaale xumidii u sababay Cudurka .
Ballaarinta shaqooyinka ee barnaamijyada shabakadda badbaadada bulshada ee federaalka Mareykan , xirmada ayaa lagu wadaa in lagu tiriyo mid ka mid ah tallaabooyinka samatabbixinta ee ugu weyn taariikhda Mareykanka, taas oo ka tarjumeysa ballanqaadyada Joe iyo Haris ee ah in la tirtiro kala duwanaanshaha muddada dheer ka hor cudurka faafa.
Sharciga ayaa u oggolaanaya $ 1,400 , malaayiin Mareykan ah oo dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaad ah, wuxuu ku xoojinayaa qoysaska iyadoo la siinaya faa’iidooyinka canshuuraha carruurta ee sannadlaha ah.
“Waxaan u ballanqaaday in dadka Mareykanku ay caawimaadda ay u sii socondoonto ,” ayuu yiri Biden Sabtidii, isagoo u dabaaldegaya guushii ugu horreysay ee sharci-dejinta ee maamulkiisa. “Maanta, waxaan dhihi karaa waxaan qaadnay hal talaabo oo balaaran oo ah inaan fulino balanqaadkaas.”
Meelmarinta aqalka Senate-ka ee cabbirka, oo loo yaqaan “Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka,” ayaa keenay war cusub oo ka soo kordhay Aqalka Cad.
Toddobaadyadii la soo dhaafey, maamulka Biden wuxuu hogaaminayey suuq shaqo oo soo hagaagaya – in kasta oo ay weli jiraan 9.5 milyan oo shaqaale ah oo ka badan shaqaalihii ka horreeyey intaan la helin faafka.
Laakiin codka Guurtida wuxuu muujiyey xaqiiqooyinka siyaasadeed ee qallafsan ee soo foodsaaray Biden iyo himilooyinkiisa dhaqaale ee hanka leh. Balanqaadkii hore ee madaxweynaha ee midnimada iyo laba-geesoodka ayaa ku dhacay xaqiiqada Capitol Hill, halkaas oo Dimuqraadiyiintu ka doorteen ka-qaadista dib-u-kicinta si weyn si ay u soo jiitaan taageerada GOP.
Lacagahaan ayaana lagu maareyn doona Safmarka Corona ee Mareykanka.
Sharcigan uu meel mariyay Senate-ka ayaa waxa horay u diiday madaxweeynihii hore ee Mareykanka Doland Trump.
Kaydka Goobjoog Select Month August 2021 (8) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)